Ny vary eo anivon’ny sakafo malagasy – jEreo Ato
Publié le 21 février 2019 8 mars 2019 - 2 minutes de lecture Catégories CultureÉtiquettes Madagasikara, Sakafo malagasy, vary
Ny vary, izay fantatsika fa foto-tsakafon’ny Malagasy dia manana ny lanjany manokana eo anivon’ny fikarakaràna sakafo eto Madagasikara. Ny sakafo malagasy etsy andaniny dia manana ny lanjany ihany koa raha mihoatra ny any amin’ny firenena hafa. Anio dia ndeha horesahana fohifohy ny mikasika ny vary sy ohatrana fikarakarana azy eo amin’ny sakafo malagasy.
Ny vary fampiasa eto amintsika
Ny vary dia mitoetra eo anivon’ny sakafo malagasy amin’ny andavanadron’ny mponina. Na dia foto-tsakafon’ny malagasy aza ity serealy ity, ary betsaka ihany koa ny fambolena azy dia tsy ny firenena malagasy irery no mamboly vary eo amin’izao tontolo izao. Anisan’izany ohatra ny firenena avy any Asia toy ny japone.
Ankoatr’izany, ny vary dia azo ambolena amin’ny tany maina an-tanety, fa tsy voatery eny amin’ny tanimbary ihany. Raha hiresaka karazany indray dia misy karazany maromaro ny vary : ao ny vary lava, ny vary japone sy ny sisa maro be. Ny lokon’ny vary koa misy karazany maromaro fa ny vary fotsy no tena be eto Madagasikara ankehitriny sady tena tian’ny olona.
Manarak’izany, misy isan-karazany ny fomba fandrahoana vary ho an’ny Malagasy dia ny vary sosoa sy vary maina ary ny vary amin’anana. Ireo dia ampifandimbiasina ka izay tiana hanaovana azy na maraina na hariva na antoandro.
Ny vary amin’anana
Anisan’ny fomba fandrahoana mampiavaka ny Malagasy ny vary amin’anana. Maraina moa no tena fihinanan’ny olona azy io. Indraindray misy mihinana azy hariva ihany koa.
Tsotratsotra ihany ny fomba fanaovana vary amin’anana. Vary sy anana no akora fototra ampiasaina ka mety avokoa ny anana rehetra. Ny tena tsara moa dia ny ananandrano, kanefa afaka miova izany araka ny tsiro tian’ny tsirairay.
Ny fomba fikarakarana azy
Andrahoana ny vary dia somary atao sosoa. Avy eo dia tetehina madinika ny anana.
Ny atao manaraka dia endasina manokana ny saosiny voatabia miaraka amin’ny kitoza vita tetitetika madinika. Arotsaka ao anatin’ny vary ny anana miaraka amin’ny kitoza vita tetitetika mandinika miaraka aminy saosiny ka haroina avy eo. Ampiana rano raha toa ka mitady ho ritra.
Io sakafo io moa dia sakafo mora atao indrindra. Tsara no sady miavaka ihany koa ny fomba fanaovana azy. Izy rahateo tsy ela ny fandrahoana azy fa vetivety ihany dia vita.
Mali : l’attaque d’un camp militaire a fait 21 morts